Jahwareer Ka Taagan Xulitaanka Baarlamaanka Cusub Iyo Guddiga Xulista oo Amaankooda u Baqaya (Warbixin) | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Jahwareer Ka Taagan Xulitaanka Baarlamaanka Cusub Iyo Guddiga Xulista oo Amaankooda u Baqaya (Warbixin)
Muqdisho (MMG) Jahwareer weyn ayaa ka taagan xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Somaaliya oo toddobaadkan magaalada Muqdisho laga bilaabay qabashada liisaskooda ay soo gudbinayaan odayaasha dhaqanka.
Xubnaha guddiga xulista xildhibaanada ayaan illaa hadda ku guuleysan inay ilaaliyaan shuruudihii u dhignaa xulista xildhibaanada cusub kadib markii ay ka awood bateen odayaasha beelaha iyo siyaasiyiin saameyn ku leh xildhibaanada cusub kuwaasoo qaarkood ay ku jiraan xubno ka mid ah madaxda dawlada.
Maalintii Axada ee lasoo dhaafay ayay xubnaha guddiga xulista ku dhawaaqeen inay si rasmi ah u bilaabeen qabashada liiska xubnaha baarlamaanka ee ka kala imaanaya beelaha Soomaaliyeed iyagoo sheegay inaysan aqbali doonin cid shuruudaha aan soo buuxin. Wariyaasha Raxanreeb ayaa indhahooda ku arkay siyaasiyiin iyo masuuliyiin saf ugu jira goobta ay guddiga xulista ku qabanayaan liisaska baarlamaanka halkaasoo dood iyo buuq ay ka taagneyd labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Sida ay Raxanreeb ka ogaatay xubnaha guddiga xulista waxaa aad u adkaatay in la raaco shuruudhii loo dejiyey mudanayaasha cusub ee baarlamaanka, waxayna taasi kaliftay in xitaa qaar ka mid ah qabqablayaashii hore ee dagaalka ay soo galaan liisaska la soo gudbiyey. Ilo wareedka ayaa Raxanreeb u sheegay in beelaha ay ku goodiyeen inay ka bixi doonaan baarlamaanka haddii lagu xujeeyo in la bedelo magacyada ay soo gudbisteen.
Dhanka kale waxaa weli heerkii ugu sareeyay maraya kala iibsiga boosaska baarlamaanka oo hadda maraya in ka badan $20-kun doolar. Xubnaha cusub ee baarlamaanka ee saacadihii la soo dhaafay aan helnay magacyadooda waxaa ku jira wasiirada xukuumadda hadda xilkeedu dhamaanayo iyo siyaasiyiin qurbe joog ah.
Shahaadooyinka been abuurka
Magaalada Muqdisho waxaa xad dhaaf u shaqeynaya goobaha lagu qoro dukumintiyada codsiyada iyo taariikh nololeedka “CV” halkaasoo aad ku arkeyso dad xildoon ah oo ah qoranaya waraaqo cadeymo ah oo ku saabsan taariikhdooda.
Mid ka mid ah goobihii aan booqanay oo ku taalla Xaafada Taree Biyaano ee degmada Waaberi ayaa wariyaasha Raxanreeb ku arkeen shahaadooyinka dugsiga sare iyo kuwa jaamacadaha oo BEEN ABUUR ah oo ay sameysanayaan qaar ka mid ah dadka xildoonka. Wariyaha Raxanreeb ayaa ogaaday in halkii shahaado ee dugsiga sare lagu iibinayo qiime gaaraya $30 (soddon doolar) halka shahaadada Bachelor-ka ee heerka jaamacadeedna lagu kala iibsanayo $50 illaa $60 doolar.
Mid ka mid ah dadka ka shaqeeya dukaamada lagu daabaco shahaadooyinka oo aan la sheekeysanay ayaa Raxanreeb u sheegay in dadka ay u sameynayaan shahaadooyinka ay yihiin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka raba inay ka qeybgalaan, isla markaana ay faa’iido badan beryahan ka helaan sameynta shahaadooyinka.
Ilo wareedyada waxay kaloo Raxanreeb u sheegeen in xubnaha guddiga xulista baarlamaanka oo ka kooban 29 xubnood oo labo ajnabi yihiin ay u guureen xarunta Xalane ee saldhiga u ah ciidamada AMISOM kadib markii hanjabaado amnigooda khatar ku ah ay soo gaareen. Ma cadda cida hanjabaadan ay kala kulmeen hase yeeshee saraakiisha AMISOM ayaa laga codsaday inay damaanad qaadaan amniga xubnaha guddiga oo rag iyo dumar isugu jira.
Faroole oo Faramarooqsaday Soo Xulista Afar Kamid ah Xildhibaanada SSC (Faah Faahin Guddiga Farsamada Xulista Baarlamaanka Cusub oo Raxanreeb Ay La Yeelatay Wareysi Xiiso Badan